Izikhwama ze-Crypto - izikhwama ze-Cryptocurrency: Ukufaka nokusetshenziswa ku-Linux | Kusuka kuLinux
Izikhwama ze-Crypto - izikhwama ze-Cryptocurrency: Ukufaka nokusetshenziswa ku-Linux
Kusukela ngonyaka odlule kuze kube manje kulo nyaka, i- I-Open World Decentralized Finance (DeFi) uthathe ukuqhakaza okukhulu futhi kwaduma, phakathi kwabantu abaningi emhlabeni wonke, phakathi kokunye, ngenxa yamanani anyukayo we Bitcoin nabanye Ama-Altcoins.
Futhi, ngenxa yenani elikhulayo nelikhulu le- vula izinhlelo zokusebenza ze-DeFi itholakale kubo bonke, phakathi kwayo kukhona "Izikhwama ze-Crypto", okuyizo esizokhuluma ngazo namhlanje kulokhu okuthunyelwe.
I-Las "Izikhwama ze-Crypto", eyaziwa nangokuthi ihunyushelwe olimini lwesiSpanish, njenge Izimali zemali ze-idijithali yemali o Izikhwama zedijithali ze-Cryptoactive. Lokhu kuvame ukwenzeka Umthombo ovulekile kanye nezinhlelo zokusebenza ezinqamulelayo.
Ngakho-ke, kule ncwadi sizogxila kafushane ekuhloleni ukuthi yiziphi izinhlaka ze- "Izikhwama ze-Crypto" kwaziwa kakhulu futhi kuyatholakala ukufaka ku- Izinhlelo ezisebenza mahhala futhi ezivulekile, okungukuthi, ku- I-GNU / Linux Distros.
Kodwa-ke, ngaphambi kokuqala i- ukuhlola nokufakwa ngayinye yazo, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ngeke sifake i- "Isikhwama se-Crypto" we I-Dogecoin cryptocurrency. Kusukela, esikhathini esifushane esedlule sanikezela incwadi ephelele yangaphambilini kuyo.
Ngakho-ke, uma ufuna ukunweba le ncwadi ngemuva kokuqeda ukuyifunda, ungavakashela isixhumanisi sayo, uma unikezwe ngezansi kanye nezinye izincwadi ezihlobene naleyo ndaba:
"UDogecoin unguUmthombo ovulekile, peer-to-peer lwemali yedijithali ekuvumela ukuthi uthumele imali ku-inthanethi. Cabanga ngoDogecoin "njengemali ye-Intanethi."" AmaDogecoin Wallets: Ungayifaka kanjani i-Wallets esemthethweni ku-GNU / Linux?
1 Izikhwama ze-Crypto - izikhwama ze-Cryptocurrency: izikhwama zedijithali
1.1 Yini ama-wallet crypto?
1.2 Yiziphi esingazifaka futhi sizisebenzise ku-Linux?
1.2.2 I-Atomic Wallet
1.2.5 I-Electrum Bitcoin Wallet
Izikhwama ze-Crypto - izikhwama ze-Cryptocurrency: izikhwama zedijithali
Njengoba kunikezwe lokho, ngezansi sizokuchaza kafushane ukuthi i- "Izikhwama ze-Crypto", kuhle ukukubeka kucace ukuthi nakho I-Cryptocurrency, ngakho-ke sizocaphuna isigaba kusuka kokuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene okubiziwe Izimpahla ze-Crypto kanye ne-Cryptocurrencies: Yini okufanele siyazi ngaphambi kokuyisebenzisa?, lapho siveza khona okulandelayo ngomqondo oshiwo:
"I-Cryptocurrency ingenye yezinhlobo eziningi ezikhona ze-Crypto Assets (ithokheni ekhethekile ekhishwa futhi ithengiswe ngaphakathi kwepulatifomu ye-blockchain), yona leyo esigabeni salokho okwaziwa njenge-Digital Asset. Ngenkathi i-Digital Asset iyinto etholakala ngefomethi kanambambili futhi eza nelungelo layo lokusebenzisa, ngoba, uma ingenayo, ayinakuthathwa njengempahla edijithali; Ithokheni ngokuvamile lichazwa njengophawu lwe-cryptographic olumele iyunithi yenani, elingatholwa ngochungechunge lwamabhulokhi, ukuze lisetshenziselwe ukuthola izimpahla nezinsizakalo kamuva."
Yini ama-wallet crypto?
I-Las «Ama-wallet cryptos» (Ama-wallet e-Cryptocurrency / ama-wallets edijithali zivame ukuchazwa njenge:
"Ibhuloho elivumela abasebenzisi ukuphatha ama-cryptocurrensets abo atholwe endaweni yesikhulumi seBlockchain. Okusho ukuthi, ucezu lwesoftware noma i-hardware lapho imisebenzi yokwamukela nokuthumela ingenziwa khona, ngenethiwekhi ye-blockchain ye-cryptocurrency ngayinye. Ngaphezu kwalokho, imvamisa yakhelwe kuphela ukugcina nokuphatha okhiye bomphakathi nokhiye abazimele bama-cryptocurrensets ethu." Yini isikhwama semali se-cryptocurrency noma isikhwama semali?
Yiziphi esingazifaka futhi sizisebenzise ku-Linux?
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ukwenza ukufakwa nokusetshenziswa kwesivivinyo se- "Izikhwama ze-Crypto" esizokhuluma futhi sibonise, sizosebenzisa i- Phendula (Isifinyezo Esibukhoma Esifakekayo) inkambiso eqanjwe Izimangaliso GNU / Linux okuncike ku- I-MX Linux, yakhiwe ngokulandela yethu «Umhlahlandlela we-Snapshot MX Linux» futhi yenzelwe i- Izimpahla ze-Crypto Assets Digital Mining, kulandela izincomo eziningi, lezo ezifakiwe kushicilelo lwethu zabizwa «Guqula i-GNU / Linux yakho ibe uHlelo Lokusebenza olulungele iMayini Yedijithali».
I-6 "Izikhwama ze-Crypto" esizohlola namuhla yilawa:
Izikhali zingalandwa kusuka ku- isigaba sokulanda esisemthethweni en ifomethi ".deb". Ngakho-ke, ukufakwa nokusetshenziswa kwayo kungaba lula kakhulu. Esifundweni sethu ku Izimangaliso, Ngemuva kokulanda sisebenzise kuphela umyalo olandelayo womyalo nge-terminal, bese siqala nge- Imenyu enkulu.
I-Atomic Wallet ingalandwa kusuka kufayela lakho le- isigaba sokulanda esisemthethweni en ifomethi ".deb". Ngakho-ke, ukufakwa nokusetshenziswa kwayo kungaba lula kakhulu. Esifundweni sethu ku Izimangaliso, Ngemuva kokulanda senze kuphela umyalo olandelayo nge-terminal:
Ngaphambi kokusebenzisa i- Isikhwama, senza ushintsho olulandelayo kunketho "oda" wakhe isixhumanisi esiqondile i-del Imenyu enkulu:
«"/opt/Atomic Wallet/atomic" %U» por «atomic --no-sandbox»
Bitcoin Core ingalandwa kusuka kufayela lakho le- isigaba sokulanda esisemthethweni seLinux en ifomethi "compressed". Ingalandwa futhi kusuka kufayela le- isigaba sokulanda sewebhusayithi esemthethweni ye-Bitcoin Organisation ngefomethi efanayo. Ngakho-ke, ukufakwa nokusetshenziswa kwayo kungaba lula kakhulu. Esifundweni sethu ku Izimangaliso, Ngemuva kokulanda sikhiphe uziphu kuphela ifayela elilandiwe, lapho siqala khona ukusebenzisa izimvume zokwenza. Futhi manje, ingavulwa ngaphandle kwezinkinga, nge-console (i-terminal) ngokwenza umyalo olandelayo:
Noma kunjalo, ungakha isixhumanisi esiqondile kusuka kumenyu enkulu ukuyisebenzisa nge-graphical interface.
Bither ingalandwa kusuka kufayela lakho le- isigaba sokulanda esisemthethweni seLinux en ifomethi "compressed". Ngakho-ke, ukufakwa nokusetshenziswa kwayo kungaba lula kakhulu. Esifundweni sethu ku Izimangaliso, Ngemuva kokulanda sikhiphe uziphu kuphela ifayela elilandiwe, lapho siqala khona ukusebenzisa izimvume zokwenza. Futhi manje, ingavulwa ngaphandle kwezinkinga, ngokuchofoza kabili kuyo, noma nini lapho kunesidingo.
I-Electrum Bitcoin Wallet
I-Electrum Bitcoin Wallet ingalandwa kusuka kufayela lakho le- isigaba sokulanda esisemthethweni en Ifomethi ye- ".AppImage". Ngakho-ke, ukufakwa nokusetshenziswa kwayo kungaba lula kakhulu. Esifundweni sethu ku Izimangaliso, ngemuva kokulanda sisebenzise kuphela i- ifayela elilandiwe, lapho siqala khona ukusebenzisa izimvume zokwenza. Futhi ngaphakathi, amathuba alandelayo angavulwa ngaphandle kwezinkinga, nge- Imenyu enkulu.
Eksodusi ingalandwa kusuka kufayela lakho le- isigaba sokulanda esisemthethweni en ifomethi ".deb". Ngakho-ke, ukufakwa nokusetshenziswa kwayo kungaba lula kakhulu. Esifundweni sethu ku Izimangaliso, Ngemuva kokulanda senze kuphela umyalo olandelayo nge-terminal:
Ngemuva kwalokho ungagijima Isikhwama, kusuka isixhumanisi esiqondile i-del Imenyu enkulu:
Kuze kube manje i-6 yokuqala "Izikhwama ze-Crypto", nasencwadini ezayo sizokhombisa ukufakwa kwabanye, okuzoba okulandelayo:
Isikhala semali seBitcoin Wallet
Futhi mhlawumbe nakwezinye izincwadi ezilandelanayo ngaphezulu "Izikhwama ze-Crypto" kanye nezinhlelo zokusebenza eziphethe "Izikhwama ze-Crypto" Izingxenyekazi zekhompuyutha ezaziwa ngokuthi I-Trezor y I-Ledger.
Ngemininingwane engaphezulu ngakunye kwe- "Izikhwama ze-Crypto" okukhulunyiwe, ungachofoza kulezi zixhumanisi ezilandelayo: Inhlangano yeBitcoin y IBit2Me Academy.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Wallets cryptos», okungukuthi, i- Izikhwama ze-Cryptocurrency noma izikhwama zedijithali eyaziwa kakhulu futhi isetshenziswe mayelana ne- Izinhlelo ezisebenza mahhala futhi ezivulekile kusekelwe ku I-GNU / Linux, isebenza njengesiqondiso esihle kakhulu kulabo abaqaliswe kulo mkhakha wobuchwepheshe owaziwa ngokuthi Defi; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Izikhwama ze-Crypto - izikhwama ze-Cryptocurrency: Ukufaka nokusetshenziswa ku-Linux
I-NOYB isola iGoogle ngokulandela umkhondo ngokungemthetho abasebenzisi be-Android
I-Intel yethula iprosesa le-Xeon elingenakulinganiswa lezikhungo zedatha